Iidolophu zaseCanada ezinemozulu egqibeleleyo | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana Maria Urbano Mateos | | Khanada
ICanada lilizwe elikhulu kakhulu, elinobume bendawo obahluke kakhulu ukuba akukho meko inye 'yaseKhanada.'Imimandla eselunxwemeni yahlukile kumathafa ethafa nakwiphondo lentaba ngasentshona, ke amaqondo obushushu nemozulu esinokuyifumana ngemini enye kwiindawo ezahlukeneyo zahluke kakhulu kummandla wehlathi elisempuma. ¿Zeziphi izixeko eCanada ezona zicetyiswayo ukutyelelwa ngokwexesha lonyaka?
NgoMeyi ukuya kuSeptemba Ngokuqhelekileyo lixesha apho abantu kunye nokhenketho lwaseKhanada basebenzisa khona inkampu kunye nokuhamba ngaphandle; Nokuba yeyiphi na kwiinyanga ngaloo mihla ungahamba naphi na usonwabile nangona, uqala ukuziva ukonyuka kwamaqondo obushushu, kuba kubonakala ngathi ayatshintsha emadlelweni, eyindawo yokuqala apho kushushu khona ekuqaleni konyaka kwaye oko kuyakuhlala kushushu kamva, kuba ski kunye nexesha lekhephu phakathi kwenyanga ka Novemba kunye neka MatshiUkuba nako ukwandisa de kube ngu-Epreli ngokuxhomekeke kwiimvula kunye / okanye izaqhwithi.
1 Iinyani ezothusayo malunga nemozulu yaseCanada
2 Izixeko zaseKhanada eziFudumeleyo ebusika
3 Kwaye ehlotyeni? Iidolophu zaseCanada ezinemozulu ebandayo
Iinyani ezothusayo malunga nemozulu yaseCanada
ICanada ililizwe elibandayo kakhulu, Ukukhuphisana neRashiya kwindawo yokuqala njengesizwe esibanda kakhulu kwihlabathi, kunye neqondo lobushushu lemihla ngemihla le -5 / -6ºC.
Uninzi lwabantu baseCanada basweleka minyaka le ngenxa yokufumana ubushushu obugqithisileyo kunakwiminye imicimbi yendalo, ngokweedatha ezivela eStatistics Canada. Umyinge wabantu abali-108 ababhubha minyaka le ngenxa yengqele, ngelixa bali-17 kuphela abathi boyisiswe zezinye iziganeko ezinxulumene nendalo.
IiBhanki eziMkhulu ze Umhlaba omtsha ithathwa njenge Eyona ndawo ikude emhlabeni. Indawo iipesenti ezingama-40 zigutyungelwe yinkungu ebusika kwaye zifikelela kuma-84 eepesenti ehlotyeni.
Isizwe ngokungathandabuzekiyo saziwa ngoku Imozulu entshaKubonakala ngathi kuyamangalisa ukuba abantu baseCanada babeyila isalathiso se-UV, umlinganiso wobungakanani bemitha yelanga yelanga kwibala lokutshiswa lilanga. Njengoko i-UV inyuka, imitha yelanga inokwenza umonakalo omkhulu kulusu, emehlweni nakwinkqubo yomzimba yokuzikhusela. Ngo-1992, Imozulu yaseKhanada izazinzulu iphuhlise isalathiso njengesixhobo sokukhusela impilo yabantu baseCanada, kwaye ngoku isetyenziselwa indawo ezinokuba ngama-48 kwilizwe liphela.
Kukho intetho eCanada ethi "Ukuba awuyithandi imozulu, linda imizuzu emihlanu." Ayinakuba yinto ethembekileyo kune Iphincher ECreek, eAlberta; apho olona tshintsho kugqithisileyo lobushushu kwimbali yaseCanada larekhodwa: i-mercury inyuke ukusuka -19ºC ukuya ku-22ºC kule nto nje enye yure.
Okulandelayo siya kuyazi zeziphi izixeko ezishushu eCanada Ngexesha lasebusika okanye elipholileyo ngexesha lasehlotyeni, ukuze sikwazi ukucwangcisa indlela yethu ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka esityelele ngalo ilizwe.
Izixeko zaseKhanada eziFudumeleyo ebusika
Ukufumana imozulu efudumeleyo ngexesha lobusika baseCanada, isixeko esikhulu esinokusifumana kwimpuma ye Iintaba ezinamatye, Ezisebenza njengomqobo ogqibeleleyo wokugcina ubushushu belanga ngezo nyanga zexesha lonyaka, izixeko ezithathu ezikhulu ezikumzantsi-ntshona we iBritish columbia ilungele ukufumana into esiyifunayo: IVictoria, Vancouver kunye Abbotsford.
Kwezi zixeko zaseKhanada zihlala zikhona Siza kufumana ubusuku obushushu obushushu nobumnene kunakwindawo ezininzi zelizwe, iintsuku ezimbalwa ezinekhephu nobusuku ngamaqondo obushushu asezantsi.
Kweminye imimandla yaseKhanada, ezona zixeko zifudumeleyo zasebusika zibekwe e Iphondo laseCanada lase-Ontario kunye namaphondo aselwandle. Phakathi kwabo, Izixeko zaseOntario EToronto, Windsor kunye neSt. IiCatharines, ebonakala ukuba inemozulu ebusika eshushu ngokufudumeleyo kunabanye.
IVictoria, sisixeko esiphikisayo esiphambili phakathi kwe izixeko ezikhulu eCanada yobushushu ebusika. Zidigri ezahlukeneyo kunye neentsuku ezingaphezulu kwezinye ngenxa yemozulu eshushu. IVictoria kuphela kwesixeko saseCanada esikhulu ngokwaneleyo ukuvumela iqondo lobushushu ukuba lihle lingaphantsi kwe -10 degrees Celsius (14 degrees Fahrenheit) ebusika.
Kwaye ehlotyeni? Iidolophu zaseCanada ezinemozulu ebandayo
INgcwele uJohn waseNewfoundland Sesona sixeko saseCanada sibaluleke kakhulu ukuba sithetha ngezixeko ezinemozulu epholileyo ehlotyeni. Unobushushu bemihla ngemihla obusezantsi kwaye ufumana ezona zinsuku zimbalwa zishushu ngeenyanga zikaJuni, Julayi nango-Agasti.
Entsha brunswick, ayisiyonto nje enye izixeko ezikhulu eCanada, kodwa ikwasetyenziselwa ukulinganisa imilinganiselo yeqondo lobushushu ehlotyeni ukubala owona mgangatho usezantsi kwilizwe kunye neentsuku ezimbalwa ezishushu.
Kananjalo ngokungaguquguqukiyo kwi ezilishumi eziphezulu kuzo zonke iikhrayitheriya kusetyenziswa ukumisela ukuba isixeko siza kusinika "Ihlobo elibandayo" yiCalgary, Alberta; Edmonton, Alberta naseVictoria naseVancouver eBritish Columbia. Iidolophu zaseCanada ezibandakanyiweyo kolu luhlu zezona ndawo ziphambili zeli lizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iidolophu zaseCanada ezinemozulu efanelekileyo
ULourdes Rizo sitsho
Molo, ndinomdla wokuya kusebenza eVictoria, andazi ukuba inokwenzeka njani.
Phendula uLourdes Rizo
UCarmen Morales obambe umfanekiso sitsho
Ndingumfazi waseMexico onoxolo
Ndinemvume yokuya eCanada
Andazi ukuba ngubani onokundixhasa ngokuhlala ngelixa ndifumana umsebenzi, nceda !!
Phendula Carmen Morales
UMaria Lopez sitsho
Singathanda ukuhlala eCanada. Umyeni wam ligqwetha. Ndingumcwangcisi-mali kwaye sinabantwana abathathu abaneminyaka eli-3 neli-17 kunye nosana oluneenyanga ezine. Zithini izinto ezinokwenzeka?
Phendula uMaría López
Fabiana, ndikwimeko efanayo nawe.Uvela kwesiphi isixeko? Bendicinga ukuya eCanada kodwa eyona nto indikhathazayo kukuba awunamntu phaya. Ngapha koko, iselilizwe eliphuhlileyo
UMDALA MILENA BASCOPE CASTRO sitsho
Molo, ndinguMiilena waseBolivia wobungcali. Ndisebenza kwiziko lezemali kwaye ndinomdla omkhulu wokuya eCanada kuba kukho ikamva elingcono lezoqoqosho ebomini bam nakunyana wam, inyani kukuba apha eBolivia umntu oqeqeshiweyo akaxatyiswanga, imivuzo iphantsi kakhulu ayonelanga ngkwakha eyakho indlu.
Ndingathanda ukuhlala ndisebenze e-Ontario kuyo nayiphi na idolophu yaseToronto, eWindsor naseCatharines
Phendula ELDY MILENA BASCOPE CASTRO
ULizbeth engel sitsho
Ndinomdla wokuya eKhanada ukuze ndiphile kwaye ndisebenze ndiyingcali yaseyunivesithi kwaye ndineminyaka engama-57 kwilizwe lam kule minyaka yobudala awusayi kuphinda ufumane umsebenzi wento efana nomyeni wam nonyana ongaphantsi kweminyaka eyi-17 ubudala ukuba wazi njani yenza
Phendula uLizbeth Engel
U-Elvy Del Carmen uDoria Ll sitsho
Ndingathanda ukuhamba nosapho lwam siyohlala eCanada, kufuneka ndenze ntoni?
Phendula u-Elvy Del Carmen uDoria Ll
UJhon jairo garcia sitsho
Molo ngokuhlwa, ndingumColombia, igama lam ndinguJhon kwaye ndingutitshala wokwakha kunye nomphathi osebenzayo, ndineminyaka engama-48 ubudala kwaye umfazi wam uneminyaka engama-31, sinabantwana ababini abancinci.Singathanda ukuya eCanada.
Phendula Jhon jairo garcia
EParis Antoniano sitsho
Ndingumntu waseMexico / eSpanish onendawo yokuhlala eMexico onomdla wokufumana umsebenzi njengomchweli, (biza ulwakhiwo okanye ifanitshala). Ndineminyaka eli-12 yamava.
IVancouver okanye iToronto zezona ndawo ndizithandayo, kodwa ndivuleleke nakowuphi na ummandla.
Ndiyabulela naziphi na izimvo.
Phendula u-Paris Antoniano
UDiana Duran sitsho
Molo ndifuna ukuya kusebenza eCanada ukuze ndinxibelelane
Phendula kuDiana Duran
Amasiko kunye nezithethe zoluntu lwasePortugal